Xisbiga Moderaterna oo doonaya in ay adkeeyaan midaynta qoysaska | Somaliska
Sida uu shaaciyay telefishinka SVT gudoomiyaha cusub ee xisbiga Moderaterna (M) Anna Kinberg Batra ayaa doonaysa in ay adkayso midaynta qoysaska soo galootiga, iyadoo balaarinaysa shuruuda in qofku uu shaqo iyo guri haysto inta aan lala midayn reerkiisa. Shuruudaan oo horay u jirtay ayaa ah mid aan lagu xirin dadka intiisa badan balse Anna Kinberg Batra ayaa hada doonaysa in marka laga reebo caruurta iyo waalidiinta dhamaan dadka kale shuruud looga dhigo in ay biilan karaan qofka ay wadanka keenayaan.
Waxay sheegtay in loo baahanyahay in sharciga wax laga badalo, iyadoo ugu baaqday koox ka tirsan xisbiga Moderaterna in ay ugu dambeyn bisha oktoobar soo bandhigaan mooshin ku saabsan arintaan. Dowladii hore ee Alliansen ayaa shuruudaan dhaqan galisay sanadkii 2009 balse dadka lagu xiray in ay shaqaystaan ayaa ah kuwo gaaraya 1% oo keliya iyadoo inta badan dadka soo galootiga ah laga reebay shuruudaan. Anna Kinberg Batra ayaan cadayn sida ay doonaysa in loo adkeeyo midaynta reeraha iyo dadka ay doonayso in shuruudaan lagu soo daro.
Xisbiyada mucaaradka ee ka tirsan xulufada Alliansen ayaa isbuucyadii la soo dhaafay si tartan ah u soo bandhigayay shuruudo iyo mooshino ku saabsan sidii loo adkayn lahaa qaxootiga imaanaya Sweden. Iyadoo xisbiga Folkpartiet (FP), Kristdemokraterna (KD) iyo Centerpartiet (C) dhamaantood ay soo bandhigeen aragtiyo ku aadan arimaha isdhexgalka iyo socdaalka. Maadaama xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD) ay taageerayaal badan kala wareegeen xulufada Alliansen doorashadii hore ayay hada u muuqataa in xisbiyadaan ay doonayaan in ay dhaqan galiyaan siyaasadaha SD si ay u soo ceshadaan taageerayaashii ka tagay.
taasi wexey kuu cadey neysaa in aan la rabin soo galootiga gaar ahaan shacabka sweden ma rabaan soo galooti wax been ah waaye sweden ayaa soo galooti jecel mar hadii ey xisbiyadi codku rabaad in ey ka hortagaan soo galootiga. wey u dhamaatay soo galooti waxaa xigi doonta maba rabno soo galooti.
sweden waa wadan aad u wanaagsan dhinaca qaxootiga iyo mideynta qooysaska hadiii loo barbardhigo wadamada kale yurub… tusaale wadamada ey dariska latahay sida norway iyo denmark…..norway waxaa sharuud ah inaad 300 kun oo krone sanadkii shaqeysid hadaa rabto qoyskaada in lagula mideeyo. marka waxaan kabaqayaa hada sweden ineey kopi gareyso siyaasada cunsuriiyinta e wadanka norway.
Asc walaalayaal arinkii 2da sano xakee ku danbeyey
Yaa waxcusub kahaaya
Aaway reer laba sano
Cidii war kahaysa hanaku soo kordhiso fadlan
arintaas 2 sano anaa war nii haya asxbey wiil waxaan hayaa shalay la sii yay ogolaasho mana lugu xujenin 2 sano saas ayaan ogahayay aniga
February 5, 2015 at 19:58
sac dhaman aakhyarta aniga waxan ku jiiray ama aan wiili ku jiira labada dano 3 biilod ka hor ayan somaray interviyow iyo dheecan wax jaawaba kama hayo markan wacana waxa aay igu yirahdan siida ugu dhaqsaha badan ee walaayal maxaa khaldan oo intaas oo dhan aay igaga amuusan
shaaqada waaba shegtay Anna ee dadka shaqo malasina mise waxay wadan imaqashii iyo mada dallo
lakinsa soo galooti ama somali ha ahaadan soo kama ficno somaliya miis yaanyo ah ka furo inta malin walba aa waal wal ku nolaan laheyd ama sharci walba lagu baraa wey nayo in uu socaayo dalkaga uu laabo kuna dhimo aamin in aa wax ku heli kartid sax
Nin walba tiisa Anagana teena Ilaahayna tiisa laakiin tii Alle unbaa soconeyso. dhagarta wey badan tahay tan Alla ugu kheyr badan, inkastoo bani’aadam uusan rumeysneen bani’aadamka intooda badan. Makrigooda ayaga ku celi Rabiyoow Adaa awood badane ahe.